Rag ka tirsan Ciidamada taabacsan Gaandi oo Shabaabka xiriir la lahaa | KEYDMEDIA ONLINE
Rag ka tirsan Ciidamada taabacsan Gaandi oo Shabaabka xiriir la lahaa
Kismaayo (Keydmedia) - Ciidamada taabacsan Hogaamiye kooxeed Maxamed Cabdi Gaandi ee ku suggan deegaanka Qooqaani ee Gobbolka Jubbada Hoose ayaa xabsiyo deegaankaasi ku yaala u taxaabay ragg ka tirsanaan ciidamada Gaandi kuwaasoo u basaasayay Maleeshiyaadka kooxda Shabaabka.
Tirada raggaan la xir xiray waxaa ay dhanyihiin 10 nin kuwaasoo la qabtay xili ay warar ku saabsan arrimaha dagalka ay siinaayeen dhinaca kale ee ka soo horjeeda ee Shabaab.
Raggaan ayaa la sheegay inay heshiis la galeen horjoogayaasha Shabaabka ee Jubbooyinka si ay wararka ugu soo gudbiyaan iyagoona bil kasta qaadanaayay $2000 ( Labo Kun oo dollar).
Sargaal ka tirsan Ciidamada dagaal ooge Gaandi oo Qooqaani ku sugan islamarkaana magaciisa ka gaabsaday ayaa Xafiiska Keydmedia ee Kismaayo u sheegay in nimankani mudo dheerba uu daba gal ku socday, isagoona sheegay in weeraradii mudooyinkii ugu dambeeyay lagu soo qaadaayay ciidamadooda ay iyagu hagayeen.
Sargaalkaan ayaa sidoo kale sheegay in raggani ay kamid ahaayeen Ciidamadii lagu soo tababaray gudaha Kenya
Waxaa uu Sargaalkaan intaasi ku daray in raggani Maxkamad la soo taagi doono lana marsiin doono sharciga waxa uu ka qabo.
Horjoogayaasha Shabaabka waxaa ay ku dheereeyaan marka ay arkaan in laga awood roonaan rabo waxaa ay u gacan haatiyaan Sarakiisha iyo Ciidamada kale ee ka soo hor jeeda iyagoona heshiis laageed la gala.
Tusaale ahaan Dagaalkii ninka lagu magacaabo Axmed Madoobe uu Shabaab Kismaayo kula galay Sanadkii 2009 waxaa looga guuleystay u Gacan haatin iyo lacago badan oo la siiyay ciidamadii u galaamaayay.